काठमाण्डौ उपत्यकामा ब`ढ्यो गा`डीको चाप, ६ घण्टामा ११ सय गाडी कार`वाहीमा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/काठमाण्डौ उपत्यकामा ब`ढ्यो गा`डीको चाप, ६ घण्टामा ११ सय गाडी कार`वाहीमा !!
काठमाण्डौ, २५ जेठ । काठमाण्डौ उपत्यकाका अन्य दिनको तुलनामा आइत`वार सवारी साधनको चाप बढेको ट्रा`फिक कार्यालयले जनाएको छ । आइतवार वाट केही सरकारी कार्यालय खोल्ने सरकारी निर्णयसंगै उद्योग र कलका`रखाना समेत खुलेका कारण पनि सवारी चाप बढेको टफिक प्रहरीको भनाई छ ।
काठमाडौंको मुख्य सडकहरुमा गाडीको चाप बढेपछि ट्रा`फिक जाम पनि भएको छ । सवारी पास नलिएकाहरु पनि सडकमा देखिएपछि प्रहरीले त्यस्ता सवारी धनीलाई कारवाही समेत गरेको छ । आइतवार मात्र ६ घण्टाको अवधिमा ११ सय ५ वटा गाडीलाई होल्ड गरिएको प्रहरीले जनाँएको छ । पास नलिएर हिँडेकाहरु लाई प्रह`रीले हो`ल्ड गरेको हो ।
लकडाउ`न उल्लं`घन बढ्न थालेपछि आइतवार ट्रा`फिक प्रह`रीले चेकजाँच लाई समेत कडा पारेको जनाएको छ । हिजो शनिबार र पानी समेत परेकाले उपत्यकाभित्र गाडीको चाप केही कम देखिए पनि आज अलि बढेको ट्राफिक प्रहरी महा`शाखाले जनाएको छ ।
लक`डाउनले जनजीवन र आर्थिक क्रियाक`लापमा समेत असर पर्न थालेका कारण मानिसहरु लकडाउनको पर्वाह नगरी काममा नि`स्कन थालेका छन् । सडकमा साना र निजी गाडीहरु अरु दिनको तुलनामा धेरै चलेका छन् ।
कन्टेनरमा ल्याइएका ५० जना भारतीयलाई धुलिखेल जङ्गलमा झारेको भिडियो फेला !!!
कम्तिमा एक साता लकडाउन थप्ने तयारी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै !!!
काठमाण्डौका यी ठाउँहरुमा लकडाउनको बि रोध गर्दै आज बाट पसल खुल्ने !